Raadi tifaftirayaasha Wax-ka-qabashada Maandooriyaha
Vol. 16 Maya 4 Dhibaatooyinka
Vol. 16 Maya 5 Suuxdinta maskaxda
Vol. 16 Maya 6 Saameynta maskaxda
Vol. 17 Maya 1 Maqnaanshaha maskaxda iyo ruuxa
Erayga sakhraanku waxa uu ku yaalaa "Qaamuuska caadiga ah" waxa uu sheegay in uu macnihiisu yahay, "Ficilka sakhraannimada, ama xaalad sakhraannimo; sakhraannimo. Xaalad farxad maskaxeed oo weyn; raynrayn, oo u kacaya waalli." Sakhraan, waxaa lagu qeexaa sida "Marka la sakhraamo khamriga ilaa heer uu lumiyo kontoroolka caadiga ah ee jidhka iyo maskaxda maskaxda, … si loo caddeeyo dabeecadda rabshadaha, murannada iyo xayawaanka."
Kudarmaar waa erey ka kooban maadada ama jirka, sun, ka timid Laatiin, sun ah, ama Griig, sunta, macdanta sunta; horgalaha in macnaheedu inay qaadato ama soo saarto; iyo, dabada,, ta ah macnaha ficil, gobol, ama wakiil. Suuxinta ayaa la sheegay inay tahay "falka sumowga ama gobolka sumowga." Horgalaha in waxaa loola jeedaa soo gelitaanka ama soo saarista “gobolka sumowga.”
Sunta ayaa la sheegay inay tahay “walax kasta oo markii loo galiyo nidaamka waxay u dhaqmaysaa si xun hab aan ahayn farsamo ahaan, ujeedo inay u horseedo dhimasho ama waxyeelo weyn u geyso caafimaadka.” Sidaa darteed khamriga ayaa ah qaadashada sunta, ama soo saarista xaalad lagu sumoobo; kaas oo “sababi kara dhimasho ama waxyeelo weyn u leh caafimaadka.” Waqtiga loo cayimay tan, waxay kuxirantahay xaddiga iyo tayada khamriga la qaatay ama la soo saaray iyo awoodda ama kartida dastuurku u leeyahay inuu ku habeeyo ama iska caabbiyo.
Ereyga maan-dooriyaha looma adeegsan karo halyeeyada casriga ah macnaha kaliya ee qaadashada aalkolada ama daroogada, laakiin waa dareen ballaaran, sida loogu isticmaalo maskaxda iyo akhlaaqda. Fikradda ereygu waa sida saxda ah oo loo adeegsado maskaxda iyo anshaxa sida ay tahay marka lagu dabaqo xaalad khamri. Halkaan, erayga sumowga waxaa loo adeegsan doonaa qaab afar laab ah.
Waxaa jira afar nooc oo sakhraansan kuwaas oo nin loo nisbeeyo, marka loo eego afartiisa dabeecadood: Maqaar ku ahaashadiisa jidh ahaaneed, dabeecadiisa maskaxeed, nooca maskaxdiisa, iyo dabeecadiisa ruux ahaaneed. Khamriga mid ka mid ah dabeecadihiisu waxay ku dhaqmi karaan mid ama seddexda kale. Qaababka sunta lagu daaweynayaa waxay noqon doonaan u sakhraamis jireed, sakhraan xagga maskaxda ah, u sakhraansanaan maskaxeed, iyo ku sumoobista ruux ahaaneed.
Waxaa loo adeegsaday tixraaca afartan maandooriyaasha macnaha erayga sarkhaansan waa: Xaaladda sumowga ee ka dhasha kicinta ama ka hortagga isticmaalka mabda'a mihiimka ah ee jirkiisa, dareenkiisa, awooda maskaxeed ama awoodeeda.
Mid kasta oo ka mid ah afarta maandooriyaasha waxaa ku jira sababayaal, khamri-cabbitaankiisa, qaababkiisa horumarineed, sababaha qaadashada khamriga, saameynta ay sarkhaansan tahay, muddadiisa iyo joojintiisa, iyo dawayntiisa.
Aalkolada iyo maandooriyaha ayaa sababa sakhradda jirka. Cabitaannada noocan oo kale ah sida gadhka, gadhka, koofiyadaha, xannibaadda, xanta, magacyada, cabitaanka, liintayaasha, waa cabbitaanno ay ruuxu khamriga u yahay mabda'a aalkolada. Qaabka loo sakhraamo waa iyadoo la cabayo kuwan ama walxaha kale ee aalkolada leh, ama loo qaato inay yihiin waxyaabaha cuntada lagu daro. Waxaa jira asbaabo loo bixiyay qaadashada aalkolada khamriga, sida in ay tahay wadashaqeynta bulshada, soo saaris wanaagsan, kaftan wanaagsan, waxay sababeysaa kalgacal, in ay tahay cuno cunno, raaxo, in ay ka hortagto ifafaalaha, in ay xasiliso dhib, Waxay ka takhalustaa taxadarka qalloocan, murugada waxay ka noqotaa, waxay keentaa illowsi darro, iyo rajo xumo, inay dhiirranto, inay fikir kiciso. Kuwa kale mar labaad, waxay u qaadaan jacaylka dareenka ay soosaarto, kuwa kalena ujeedo daawo oo uu dhakhtarku qoray.
Saamaynta sunta waxa lagu muujiyaa ficillada jirka, xaaladda jirka, dareenka, dabeecada, iyo maskaxda qofka; kuwaas oo lagu go'aaminayo nooca iyo tirada khamriga la qaatay, xaaladda jidhka cunaysa, iyo awoodda maskaxdu ula tacaasho khamriga iyo jidhka. Marka loo eego dabeecadda qofka iyo heerarka kala duwan ee sarkhaanta, waxaa lagu muujiyey diirimaad, dhalaal, nacayb qaab ay weheliso karti, doodeyn, dagaal, reebitaan, sawaxan hadal,; iyo kuwan waxaa ku xiga niyad-jabka, raaxada, daalnaanta, caajisnimada, miyir-beel la'aanta, dhumuc iyo kalsooni la’aan xagga hadalka, is-aamusnaanta, ololeeynta, degganaan la’aanta. Dareemka dareenku wuxuu ku kala duwan yahay jilicsanaanta khafiifka ah iyo naxdinta rabshadaha, min xiisaha weyn ilaa silica iyo dhimashada.
Aalkolada ku jirta dhammaan khamrada aalkolada leh waxay bilaabeysaa inay soo saarto saameynta ay ku leedahay dastuurka oo dhan jirka isla marka lagu daro caloosha. Hadday nugul tahay in si dhakhso ah loo soo saari doono ama dib loo dhigi doono waxay kuxirantahay isku xirida cabitaanka iyo cabirka iyo awoodda ruuxa khamriga ee xarunta. Waxay kuxirantahay xarunta, aalkolka ayaa marka hore wax yeeleysa jirka ama maskaxda. Xaalad kasta, si kastaba ha noqotee, waxay si toos ah ugu hawlgashaa nidaamyada neerfaha, ka dib dareeraha jirka, murqaha, iyo waxay ka baxaan qeyb jirka ka mid ah oo aan la taaban. Marka laga qaato tiro yar dadka ay jirkoodu xoogan yahay, oo caafimaadkoodu iyo dheefshiidoodu wanaagsan yihiin, saameyntu waxay umuuqataa inay faa'iido leedahay; ugu yaraan, wax dhib ah lama soo marin. Adeegsiga dheer iyo caado ahaan, xitaa tiro yar, iyo gaar ahaan kuwa maskaxdoodu daciif tahay, daciifnimo daciif ah iyo jirrooyinka aan fiicnayn, saameyntu waa halis. Markii ugu horreysay ee la qaado, aalkoladu waxay u dhaqmeysaa sidii wax kiciya oo qiyaas yar ah. Qiyaasaha waaweyn waxay keenaan sakhraan; taasi waa, xudunta iyo dareemayaasha naxariista leh ayaa wax laga qabtaa, lobyada cerebrum-ka waa la tiriyaa. Kuwani waxay ka falcelinayaan welina waxay ku shaqeeyaan nidaamka laf-dhabarka, curyaannimo natiijooyinka habka dhexe ee dareemayaasha, muruqyada iskaa wax u qabso ah ayaa lagu dhaqdhaqaajiyaa, firfircoonida caloosha ayaa dhaqdhaqaaqyadooda la xakameynayaa. Qeybaha kaliya ee jirka ee aan qabin kabuubyada iyo curyaaminta ayaa ah xarumaha otomatiga ah ee ku jira medulla oblongata, kuwaas oo wata iyo nidaamiya wareegga iyo neefsashada. Haddii aan khamri badan la qaadan, waqtiga sakhraanka wuu dhammaanayaa, jirka ayaa dib u bilaabaya howlihiisii, xuquuqaha laftiisa iyo waxyeelada aalkolada ayaa waayi doonta. Waqtiyo badan oo sakhraansan, ama isticmaalka caado ee aalkolada qaab kasta ha noqotee, habka neerfaha badanaa wuu xumaadaa, xubnaha ayaa liita ama jirran mana fulin karaan howlahooda caadiga ah. Khamrigu wuxuu sababa hoos u dhaca qanjirada qarsoon ee caloosha wuxuuna hubiyaa shaqadiisa iyo dheefshiidka. Waxay adkeyneysaa beerka, waxay daciifisaa wadnaha iyo kilyaha, waxay keenaan xumaanshaha maskaxda. Marka la soo koobo, waxay wax u dhimeysaa dastuurka iyada oo sababi doonta in la buuxiyo unug isku xira gabi ahaanba dhammaan xubnaha iyo unugyada jirka. Dhimashada ka dib joogitaanka khamriga waxaa laga heli karaa dareeraha jirka oo dhan. Waxaa si fudud looga heli karaa dareeraha 'cerebro-spinal fluid' marka raad raacu ku xumaado meel kale oo jirka ka mid ah; taas oo muujineysa sida ay ugu dhowdahay nidaamka neerfaha.
Waxaa suurogal ah in aan la iloobin waxyeellada ka dib, iyo iyada oo lagu kalsoon yahay wanaagga ay ku yeelan karto bukaannadooda, dhakhaatiirta ayaa sababiyey burburka khamriga badan. Dhakhaatiir badan ayaa u qora khamriga nooc kasta oo ka mid ah qaabkiisa inuu yahay wax kiciya ama tonic ah, waxaana mararka qaarkood la sheegaa inay qaababka qaarkood u sameysaneyso dhiig, xoog siin doonto, jirka dhisi doonto. Haddii ay tani tahay iyo haddii kale, waxaa hubaal ah in khamriga loo qaatay dawo ahaan uu si xun u abuuray rabitaanka cuntada iyo rabitaanka khamriga aalkolada ee jirka, bukaanku wuxuu had iyo jeer ku noqdaa qof sakhraansan.
Dariiqo kale oo lagu dhisi karo sakhraannimo waa soosaarida weyn iyo iibinta aalkolada khamriga ee maaskaro waxa loo yaqaan "dawooyinka aasaaska ah". Kuwaani si ballaaran ayaa loogu xayeysiiyaa inay ka bogsadaan cudur kasta ama loo malaynayo inay jiran yihiin. Kuwa iibsada dawooyinka xaqiijinaya ee lagu xaqiijiyo sunta aalkolada leh waxay rumeysan yihiin inay ka faa'iideysteen saameynta dhiirigelinta ee ay soo saarto, oo wax badan ayey soo iibsadaan. Waxyaabaha kale ee dawooyinka laga helo - dhammaantood waa kuwa aan dhib badnayn. Laakiin aalkolada ku jirta dawada patent-ka badanaa waxay soo saartaa saamaynta kuwa isticmaala, kuwa kuwa soosaaraa ay damacsan yihiin in taasi ahaato. Taasi waa, waxay abuurtaa rabitaan iyo rabitaan khamri qaabkaas.
Saamaynta aalkolka ee khamriga ku saleysan dareenka ayaa ku kala duwan dareenka khafiifnimada ilaa acuteness iyo xoog weyn, ka dibna wuxuu hoos ugu dhacayaa dhammaystir la'aanta. Isbeddeladaani waxay daba socdaan midba midka kale tartiib tartiib ama dhaqso. Waxaa jira iftiin mahadcelin leh oo jidhka ku dhex socda oo soo saaraya dareen la isku waafiqi karo. Indhaha iyo dhegtu waxay noqdaan kuwa feejignaan badan. Dhadhanku waa mid wacan. Waxaa jira dareen qirasho iyo jahwareer taasoo horseedaysa in la raadsado xiriir lala yeesho dadka kale, ama haddii kale niyadda, moroseness, surwaalka iyo la shaqeynta leh rabitaanka in laga fogaado kuwa kale oo keli ahaanta, ama u leh damac ka soo horjeedda iyo dabeecad xumo. Waxaa jira dareen kuleyl, u diyaarsanaanta in wax laga qabto, in lagu murmo ama la dagaallamo waxa la qabtay ama la yiri. Dareenka jirro ama kabuubyo ayaa la dareemayaa. Waxyaabaha ku xeeran waxay umuuqdaan inay dhaqdhaqaaqaan oo ay isku daraan. Dhulku wuxuu ku dhaqaaqaa mowjado jilicsan, ama sida bad badda oo kale. Ma jiraan wax hubaal ah oo masaafooyin ah. Cagaha iyo lugaha waxay noqdeen miisaan culus. Indhuhu way cuslaadaan oo way dabaasho, dhegaha ayaa ilmadaya. Carrabku aad buu u badan yahay, oo wuu diidaa inuu muujiyo. Bushimaha ayaa lumiya dabacsanaantooda; waa alwaax mana caawin doonaan sameynta dhawaqa ereyada. Baqdin ayaa soo socota. Jidhku wuxuu dareemayaa sida rasaasta. Mabda 'miyirka ayaa laga gooyaa xaruntiisa dareenka ee maskaxda, halkaasna waxaa ku dumin kara is beddel la'aan iyo dhimashaba. Saamaynta ka dambeysa khamriga ayaa ah calool xanuun, madax xanuun, harraad, gubasho, gariir, walwal, nacayb neceb fikirka khamriga, hunguriga xun ama gaajada cabitaanka cabitaanka badan, xasilooni, doqon ama liidasho, xaalad loo yaqaan 'delirium gariir', kaas oo mabaadiida miyirka leh lagu qasbay meel ka hooseysa xaaladda jireed, halkaas oo ay ku aragto waxyeello aan lahayn ama hal abuur leh, digaag, cayayaan, fiidmeerta, abeesooyinka, masasidaha qaldan, kuwaas oo isku dayaya inay eryaan ama ka baxaan oo isku dayaan inuu ka baxsado iyada oo wax yar ama looma jeedin xaaladaha jirka ama kuwa ku xeeran. Xaaladda jirta ee qofka la silcayaa laga yaabo inuu derbiyada ka dalooliyo oo uu duullimaadyada ka soo qaato, ama uu hawada ku eryo waxyaabo aan qofna arkin mooyee, isagoo indhihiisu argagaxsan yihiin, oo aad u faraxsan, ama laga yaabo inuu qabow iyo cabsi dareemayo. , isku day inaad ka leexiso waxyaalaha isaga eryanaya, ama inaad ka baxsato wuxuu arkaa, ilaa uu gal galo, ama daal daran.
Saamaynta aalkolada ku leedahay fikirka, dabeecadda, maskaxda qof ahaaneed, waxay inta badan ku xirnaan doontaa awoodda maskaxda ee maareynta isticmaalkeeda; laakiin, si kasta oo ay u xoogan tahay maskaxda, sii wadista isticmaalka khamriga aalkolada leh ee tiro badan ayaa lagama maarmaan ah inay soo saarto isla saameynta jirka. Waa inuu saameeyaa fikirka iyo dabeecada; laakiin, in laga adkaado mooyee, wuu dumin doonaa oo maamuli doonaa maskaxda.
Awoodda aalkolka ee khamriga isbeddelada la yaab leh waxay umuuqataa in lagu sameeyay dabeecadda. Qofka aamusan oo dabeecad wanaagsan ayaa loo rogi doonaa isku-tag ama jinni, oo qofkii had iyo goor la siiyo hadal badan iyo xanaaq badan ayaa laga yaabaa inuu noqdo qof jilicsan oo aan hawl lahayn. Awoodda aalkolada qaar ayaa ku murgi doona sida carruurta ama waxay u jilicsan yihiin sida edeb-darrada. Qaarkood waxay ku adkaysanayaan inay sheegaan sheekada noloshooda. Ragga caqliga leh ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo dareen leh iyo usbuuc ku saabsan dhacdooyinka xamaasadda leh. Kuwa ku jeesjeesa diinta iyo qaabkeeda, waxay soo xigan karaan jumlado dhaadheer oo ka imanaya kutubta, waxay siin karaan muxaadarooyin ku saabsan mowduucyo diimeed, waxay hanteen nooc diinta ama xafladaha diimeed waxayna ku doodayaan sababta iyo quus ka qaadida karaamada, iyo laga yaabee xumaanta khamriga. Awoodda alkolada ragga qaar ayaa buuxinaya boosaska kalsoonida iyo sharafta waxaa loo beddelaa xayawaano siiya xukun xor ah oo damaca damacyadooda xun iyo damacyadooda, ku lug leh caadooyinka xunxun, fikirka taas oo cabsi gelin doonta asxaabtooda sida ay naftooda u hurin lahaayeen daqiiqado miyir qaba. . Salka ku haynta dillada aalkolada iyo dambiyada kale ayaa la fuliyaa kuwaasoo ragga aan si kale looga yeeli karin inay sameeyaan, oo iyagu murugo iyo burbur u keena naftooda iyo dadka kale.
Aalkoladu waxay xakameysaa fikirka dadka qaar waxay kicisaa fikirka kuwa kale. Qoraayaasha iyo farshaxanada qaarkood waxay sheegtaan inay shaqadooda ugu fiican qabtaan marka ay awooddooda hoos timaad; laakiin kuwanu waa saamaynta ku meelgaarka ah, oo ay ku jirto kicinta khamriga. Sigaar-cabiddu waxay wiiqaysaa akhlaaqda, midabaysaa fekerka, oo maskaxda ayey dumisaa. Noocyada kale ee ku sumowga jirka waxay sababi karaan ciil-bax, keenaan dhibaatooyin qoys, caafimaad dumin iyo dhimasho; laakiin qamriga oo keliya ayaa baabi'in kara daacadnimada iyo karaamada, ka saari kara dhammaan raadadka sharafta iyo is-ixtiraamka, u beddelo ragga aaminaadda iyo naxariis u rogayaasha bilaa naxariis darrada ah iyo tuugada iyo kuwa wax been sheega, kuwa aan u adkaysan karin dhaawaca dadka kale, isla markaana soo saari kara ceebi iyo sharafdarro. Khamrigu wuxuu awood u siiyay oo keliya ragga hodanka ah iyo dhaqanku inay runtii ku gurguuraan sayladda, oo halkaas ka soo baxaan, hoos u dhigaan, kor u qaadaan indhahooda dhiigooda isla markaana ay gaaraan gacmahooda dabacsan si ay u baryaan dadka lugaynaya ee ku filan inay iibsadaan cabbitaan.
Sababaha sunta jirka u leh daroogada waa isticmaalka opium, ganjah (ka xashiishad cannabis), baang (xashiishadda sativa), kala duwanaanta kuwani xeryahooda kala duwan iyo walxaha kale.
Sababaha loo qaatay qaadashada maandooriyaha ayaa ah, inay aamusaan dareemayaasha, xanuun ka yareeyaan, hurdada soo saaraan, awoodna u siinayaan macaamiisha inay ka fogaadaan dhibaatada, u arkaan riyooyin iyo inay maqlaan dhawaaqyo aan caadi ahayn, iyo in ay tahay in la qaado sababta oo ah - lama caawin karo. Siyaabaha loo isticmaalo daroogada maandooriyaha ayaa ah qaab kiniin ah, qabyo ah, duris ahaan, sigaar cabid ama cuniddiisa. Dhakhaatiirta ayaa badanaa ah kuwa u soo bandhiga maandooriyaha kuwa hadhow noqda dhibbaneyaasha maandooriyaha. Ogaanshaha rabitaanka bukaanka inuu leeyahay natiijooyin deg deg ah iyo inuu ka bogsado xanuunka, ama inuu ku qanco rabitaankooda daroogada, dhakhtarku wuxuu qorayaa ama siiyaa maandooriyaha iyadoo aan tixgelin la siinin cawaaqibka ka dhalan kara. Adeegsiga cirbadaha, daloollada iyo dambaskooda, dhakhaatiirta qaar waxay bukaannada ka bararaan bukaannada moorfiinta mooryaanta sannad walba. Maqalka saamaynta cajiibka ah ee ay keento sigaar cabista opium, yeelashada “saaxiib,” qabatinka caado ee soo jeedinaysa iskuday, hurdo ladan, arag sigaar cabbayaasha iyagoo daaqaya iyo tuubooyinkooda, xiisaha aan loo arkin, ama rabitaanka xun, qofku wuxuu iskudayaa biibiile, “mid keliya.” Taasi inta badan kuma filna. Mid kale ayaa lagama maarmaan ah “in la soo saaro saamaynta.” Saameyntu badanaa maahan wixii uu filayey. Waa inuu helaa saamaynta la filayo. Mar labaad ayuu sameeyaa. Markaa isagu wuxuu noqdaa "nin si xun u isticmaala dawada." Sidan oo kale ayaa laga yaabaa inuu la qabsado dhaqanka 'ganjah', kaas oo sida caadiga ah la cabbo. Bhang waa sakhraansan tahay, ama waxaa loo cunaa sidii macmacaan, ama waxaa loo qaatay cabitaan ahaan qaab daciif ah, oo loo yaqaan siddhi. Bhang maahan xashiish ama indh cufan. Saameyntooda ayaa kala duwan. Haashish waa caleemaha jilicsan ee ka imanaya xashiishka sativa, ka hor inta caleemihiisu furmin, oo caleemaha la qalajiyey oo cabbay. Bhang waa caleemaha la qaado ka dib ubax, maydh, qulqulaya oo sakhraansan. Bhang guud ahaan looma yaqaan Galbeedka, laakiin waxaa la sheegaa inay ku badan tahay Hindiya. Halkaas ayaa la sheegay inuu qaato keligiis, ama shirar la xushay, ama xafladda weyn ee sanadlaha - Durja Pujah.
Saamaynta maandooriyaha ee jirka ayaa ah, inay farageliyaan dheefshiidka, kordhiyaan ama yareeyaan neefsashada iyo wareegga dhiigga waxayna u dhintaan dareemayaasha ama waxay ka dhigaan kuwo daran. Opium ayaa jirka ka dhigaysa mid firfircoon. Ganjah waxaa laga yaabaa inuu u dhaqmo sidii mid faraxsan. Bhang waxay soo saartaa deganaansho. Saamaynta ku sumowga maandooriyaha maandooriyaha ayaa ah, wali jir ahaanta iyo furitaanka dareenka kale waxyaabaha aan aheyn jirka, maahan wax caadi ah. Waxaa jira dareen taagdarro, riyooyin ah, oo ah sidii uu ugu gudbayo hurdada soo toosa. Agagaarka jirka waa la buunbuunin karaa, waxaa lagu qarin karaa ama ka dhici karaa muuqaallo cusub oo muuqda. Haweenka quruxda badan, ragga qurxoon, waxay la dhaqmaan ama ula hadlaan dhaqan wanaagsan. Jardiinooyinka xiisaha leh ee isha ku farxa, muusig soo saaridda ayaa la maqlaa oo cadar udgoon ayaa ku daraya soo jiidashada. Taas oo inta badan ka soo jiidata dareenkiisa, waxay kujirtaa dareenka maaddada. Is-dejinta, murqaha iyo fudfududka ayaa laga dheehan karaa saamaynta opium-ka marka loo eego kuwa ganjah. Ganjah badanaa wuxuu sababa dareenka dareenka inuu si firfircoon uga firfircoon yahay waxay ka yimaadeen saameynta opium. Dareenka ka dhashay Bhang waxaa xukuma kuwa ku guuleysta waqtiga qaadashada, halka kuwa opium iyo ganjah ay badanaa aad uga duwan yihiin. Ganjah iyo opium dareenka ayaa kordha. Xilliga 'opium' ku yaal ayaa kordha ilaa maaddada ay miyir beesho. Marka uu miyir la 'yahay ayuu si tartiib tartiib ah uga soo baxaa ama si kadis ah. Soojiidashada, rayrayn, farxadda ayaa badanaa dib loo noqdaa. Halkii ay ka abuurmi lahaayeen jacaylka isaga ku sasabtay ama ka xumaaday, wuxuu ku dhexjiraa waxyaalo xunxun, waxyaalo xunxun, waxyaalo karaahiyo ah iyo waxyaalo kale oo aad u xun oo laga naxo, iyadoo laga dheehan karo inuu mar uun ka baxsan karo maandooriyaha. Waxaa laga yaabaa inuu ku qaboobo kaliya qallal gubasho ama madax xanuun iyo kala-goysyo kale oo jidhka ah oo laga yaabo inuu ka bogsado isagoo qaadanaya dawo kale. Saamaynta ka dib bhang-ga sidaa looguma dhawaaqin, in kasta oo laga yaabo in ay kaa qaado rabitaanka cuntada; runtii, waxay ka hortageysaa gaajada; iyo, sidoo kale, waxay u badan tahay inay soo saarto dareemo faaruq ah, madhan iyo faa'iido la'aan. Haddii daawo aad u badan la qaato, macaamilku ma toosi doono.
Khamri-cabbida maandooriyaha wuxuu saameyn ku yeeshaa fekerka iyo dabeecadda qof loo maleynayo. Wuxuu la kulmaa xorriyad gaar ah iyo dhiirigelinta fikirka iyo ciyaar faneed, taas oo qof caadi ah uusan kuheli karin xaaladdiisa caadiga ah. Fikirkaani wuxuu qaadanayaa garabka wuxuuna u socdaalo meelo muuqata oo aan xuduud lahayn, qayb kastoo ka mid ah iyo iyadoo la raacayo rabitaanka mala-awaalka, dhisidda qaab dhismeedka, qalabeynta ciidamada, aasaaska boqortooyooyinka. Isaga qudhiisa isagaa abuuraa adduun iyo dadba; waxaas oo dhan oo uu adeegsado sixirka awoodda si uu u sameeyo oo uu ugu raaxeysto. Sarkhaanta maandooriyaha, xoghaynta isxilqaan ayaa laga yaabaa inuu noqdo boqorka maaliyadda, oo uu xakameeyo suuqyada adduunka; gabar dukaan ah ayaa boqorad noqota, oo ay ka soo qeybgalaan marti-sharaf, oo ay la koraan ama ay ka masayraan gabdhaheeda; wan a a a dede de dede de ade wande wan wandededede wan wandedededede wandede. Wax kasta oo fikirka iyo malayntu suurtageliyaan waa sida xaqiiqda lafteeda ee khamriga maandooriyaha.
Ficilkan fikraduhu wuxuu soo saaraa fal-celin ku saabsan dabeecadda ku habboonaanaysa mas'uuliyadeeda iyo waajibaadkeeda adduunka. Waxaa jira isu-dheellitir la’aan xagga qiimeynta waxyaabaha. Fiiro u yeelashadu waxay u qaybsantaa xilliyada sarkhaansan iyo waajibaadka adduunka. Muuqaalka anshaxa ayaa hoos loo dhigaa, ama akhlaaqda waxaa lagu tuuri karaa dabaysha. Si kastaba ha noqotee hal maandooriye dheer oo la qabatimay maandooriyaha wuxuu isku dayi karaa inuu qariyo dabeecaddiisa, waa loo garan doonaa kuwa fahmaya dabiicadiisa. Waxaa jira faaruqnimo gaar ah, jahli, xushmad la'aan, ku saabsan qofka, sida in kastoo dareenkiisa ay u dhaqmayeen meel kale. Waxa lagu gartaa maqnaansho gaar ah oo ah soo nooleyn, oo waxaa ku hareereysan jawi u gaar ah ama urka oo ka qeybqaata dabeecadda maandooriyaha uu u aroorey, iyo taas oo ay u egtahay inuu ka sarreeyo.
Saamaynta bhang waxay ka duwan tahay kuwa opium-ka iyo xashiishka iyadoo qofka isticmaala bhang uu go'aamin karo mawduuca fikirkiisa ka hor inta uusan hoos u dhigin saameyntiisa. Iyada oo ay saameynayso bhang, mid ayaa laga yaabaa in uu sii wado wada-hadal ama uu sameeyo kooras caqli-gal ah. Laakiin wax kasta oo uu ku fekero ama sameeyo waa la buunbuuninayaa, la kordhin doonaa ama la kordhin doonaa si heer sare ah. Mawduuc kasta oo fikirka ah ayaa laga yaabaa in maskax ahaan loo baaro sida qayb ka mid ah unugyo hoos yimaada mikroskoob awood sare leh. Walxaha ku xeeran ama sawirada ereyada waa la balaadhin doonaa oo midabayn doona si ay ula socdaan dareenka jira. Dhaqdhaqaaq kastaa wuxuu u muuqdaa mid muhiimad weyn leh. Dhaqdhaqaaqa gacantu waxay dabooshaa waqti dheer. Talaabadu waxay la mid tahay boqol mitir; hal daqiiqo oo bil ah, saacad iyo da'da; waxaana laga yaabaa in waxaas oo dhan ay la kulmaan iyada oo aan laga gooyn jidhka.
Saamaynta ay ku yeelanayso maandooriyaha maandooriyaha ayaa ah, in maanka uu lumiyo dareenka qiyamka iyo fikirka saamiga; waa mid liidata, oo noqota mid aan dheellitirnayn, oo aan awood u lahayn laqabsashada dhibaatooyinka nolosha, ku sii wadidda horumarkiisa, fulinteeda mas'uuliyadeeda ama ka-qaybgalkeeda shaqada adduunka.
Mudada aalkolada ama maandooriyaha Waxaa jira qaar iyagu, ka dib markay la kulmeen saameyn ku meel gaar ah oo diiday inay cusbooneysiiyaan. Laakiin had iyo jeer marka qofku isku qabadsiyo labada dhaqan midkood, isagu wuxuu sii wadaa addoonkiisa nolosha weligiis.
Waxaa jira daawooyin qaarkood oo loogu talagalay khamriga, oo ay ku yaalliin magacyada asal ahaan, taas oo xakamayn doonta rabitaanka khamriga khamriga. Daaweynta daaweynta daweynta maandooriyaha ma aha badiyaa lagu guuleysto. Haddii qofka 'aan bogsan' uusan markale cabbin khamriga wuu sii jirayaa. Laakiin haddii aan marka hore lagu bogsan fekerkiisa iyo haddii uu u oggolaado fikradiisa inuu ka fiirsado mawduuca khamri la cabbo oo uu tixgeliyo ficilkiisa cabbitaankiisa, fikirka cabitaanka wuxuu keenayaa xaalad halis ah, oo uu ku dhiirigelinayo mid ama fikirkiisa, "inuu hal keliya hal qaado." Markaas gaajadii hore ayaa la toosay, oo wuxuu ku soo noqonayaa meeshii uu hore u ahaan jiray.
Daaweynta khamriga iyo maandooriyaha maandooriyaha waxay ku siin karaan kaalmo iyo caawimaad xagga daaweynta ah, laakiin daaweynta kaliya ee loogu talagalay sakhradda jireed waa in lagu bilaabaa oo lagu saameeyaa fikirka. Halkaasna halganka awoodda iyo xasaanadda waa in lagula dagaallamaa oo la dhammeeyaa oo lagu guuleystaa, ka hor inta aan la helin dawo rasmi ah oo runtii ah.
Ruuxa ku shaqeeya maandooriyaasha wuxuu ku noolyahay albaabka dareenka. Uma ogolaaneyso mabda'a miyir-qabka ee dadku inay ka gudubto boqortooyadeeda, ama ogaato siraha iyo qarsoodiga, ilaa uu isagu isu muujiyey inuu ka badbaaday khalkhalka dareenka uuna bartay inuu xakameeyo.
Ruuxda aalkolada waa sarkaal sare ee sharciga. Waxay taagan tahay xuduudaha xuduudaha adduunka. Waa mid adeeca kuwa adeecda oo sayidnimada sharciga ah, oo u oggolaan doona inuu ka gudbo oo xitaa ku sii adkaysta markay garanayaan oo awood u leh inay xakameeyaan. Laakiin waa dulun, naxariisla'aan iyo naxariis darada kuwa ku xadgudba oo adeecaa sharciga ay waajib ku tahay in lagu adeego.
In ka nambarka Febraayo waxaa lagu daweyn doonaa noocyo kale oo maandooriye ah.